Ndị agha Naịjirịa: Anya anyị adịghị n'iwere ọchịchi - BBC News Ìgbò
Ndị agha Naịjirịa: Anya anyị adịghị n'iwere ọchịchi
9 Maachị 2018
Nkenke aha onyonyo Tukur Buratai bụ onyeisi ndị agha Naịjirịa
N'akwụkwọ ozi ha wepụtara ụnyaahụ, ndị isi ndị agha ala Naịjirịa ekwetaghị n'atụmuche osote onyeisi ụlọomeiwu ukwu bụ Ike Ekweremadu na ha ga-ewegharị ọchịchị ma ọ bụrụ na ọchịchị onyekwuouche gaa n'ihu na ịlọghachị azụ dị ka ọ si eme ugbua.
Ha gwara ndị Naịjirịa ka ha ghara iji okwu osote onyeisi ụlọomeiwu ukwu kpọrọ ihe.
Abalị ole na ole gara aga, oge ha na-enwe nrụrịtaụka n'ụlọ omeiwu ukwu banyere otu ndị gọvanọ ụfọdụ si agba ndị esoghị ha mgba n'ụzọ pụrụ iche, Ekweremadụ tụrụ arịrị n'etu ọchịchị onyekwuoucheya si ala azụ na Naịjirịa, nwere ike ime ka ndị agha bịa were ọchịchị ọzọ.
Nkenke aha onyonyo Ndị agha Naijiria
Ma na ọnụ na-ekwuru ndị agha Naijiria bụ Brigadier-Generalụ John Agim, kwuru n'akwụkwụkwọ ozi ahụ na ndị agha Naịjirịa bụ ndị mara ọrụ dịrị ha, na ha enweghị ebumnaobi ọbụla ibanye na ndọrọndọrọ ọchịchị.
O kwuru na okwu Ekweremadu nke dị ka okwu ndụmọdụ e jiri obi ọcha kwuo bụ 'mkparị' nye ndị agha Naịjirịa."
Ọ gara n'ihu kwuo na ndị agha kwenyere ma na-ehube isi n'ọchịchị onyekwuoucheya.
"Mgbe ọchịchị si n'aka ndị agha lọghachị n'aka ndị nkịtị n'afọ 1999, e wepụrụ ndị agha niile bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. E mere nke a iji gbanahụ ha ịsa ndị agha ndị na-etolite etolite isi, ka ọchịchị ndị nkịtị were zụgharia ndị agha, ka ha na-arụ ọrụ ha dịka o kwesịirị."
"Ka ọ na-erute n'afọ 2009, ọ were anya na site n'ọzụzụ mbụ a na-enye ndị agha, azụgharịala ha irubere ọchịchị nkịtị isi. Ha kwụsikwara ike n'isi ịkwadọ ọchịchị ndị nkịtị."
'Nyenụ ụmụnwaanyị ọkwa dị elu n'ọrụ ụlọakụ'
'Anyị na-achọ dinta gburu enyi'
'Ọkụ Ọnitsha ataala isi nne na nwa ya'
Mama dị afọ 104 ji ọrụugbo zụọ ụmụ ya
Ụfọdụ nri ndị Igbo anaghị erikawazị